Iindaba - IARICO | Ecocekileyo NJENGOKUQHELEKILEYO
IARICO | Ecocekileyo NJENGOKUQHELEKILEYO
Yinto "yoyilo eyenza imveliso" ixesha., Uninzi lwabayili bayagxila kwinkangeleko okanye kumacandelo, ayilelwe yimveliso ngombono wabo. yenza ukunqongophala kokukwazi ukusebenza kunye nophuhliso lomsebenzi ngaphandle kokuqwalaselwa ngokubanzi.Kunokuthi kwenziwe amava okusebenzisa.
Ukuthatha umxholo wendawo enamacala amathathu, ukudibanisa abantu kunye nokusingqongileyo ukucinga kunye nokuphonononga elona hambo lihle kakhulu lokubuyela emzimbeni womntu kukucinga okuqhubela phambili kunye nokuyila kokufuna imvisiswano egqibeleleyo kwisitulo sangoku somyili weofisi.
IFOMU ILANDELA UMSEBENZI
Ukujonga okuhle, ukusebenza kunye nokuzinzileyo, indlela yokuphuhliswa kunye ngu-GOODTONE kunye neJamani IBHAKATHI elibonelela kakhulu ngomthengisi.
Isiqwenga semoto seAluminiyam
Iingalo zesinyithi ezihleliweyo kubume bemeko yesaphetha, ziyonyuswa ngamandla ngenkxaso yemitshini, intle, yomelele kwaye izinzile.
Kwinkqubo yoyilo ye-ARICO, eyona nto ixhalabisayo kuyilo oluphikisanayo. Ifuna imigca elula necocekileyo kunye nemisebenzi emininzi. Umyili wethu wenza lula inkqubo yasentwasahlobo ukunciphisa ubungakanani boomatshini.
Izinto ezininzi onokukhetha kuzo
Isitulo esijikeleze umva kunye nasemva kokujikeleza, kunye nesakhiwo senkxaso yesinyithi kwipolishi
kunye nombala ocacileyo wesilivere wokutshatisa isikhumba sokwenene, iMicro fiber yesikhumba okanye ilaphu.
Amaqela ama-5 amaLusu okwenene / iMicrofiber yeSikhumba
Izixhobo zePolish Metal
Amacwecwe eSinyithi eSinyithi
IProfayili yoMyili, uPeter Horn
Uyilo lwePhondo kunye nezoBunjineli lishishini elidumileyo loyilo lweshishini kunye nophuhliso lwemveliso, ukufumana amabhaso angapheliyo afana neRed Dot Design Award, i-IF Design Award kunye neJamani Design Award esekwe eDresden eJamani. Izitulo zeofisi zamashishini amakhulu esitulo seofisi.